खुसीको खबर : सुनको मूल्य ओरालो लाग्यो ! प्रतितोला ५०० ले घट्यो … – Life Nepali
खुसीको खबर : सुनको मूल्य ओरालो लाग्यो ! प्रतितोला ५०० ले घट्यो …
काठमाडौँ । लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्यमा आज सामान्य गिरावट देखिएको छ । शनिबार प्रतितोला रु ७१ हजार ५०० मा कारोवार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७१ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।तेजाबी सुनको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७० हजार ७०० कायम भएको छ । शनिबार तेजाबी सुन प्रतितोला रु ७१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो ।त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि केही ओरालो लागेको छ । शनिबार प्रतितोला रु ८४० मा कारोवार भएको चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला रु ८३० कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ । पछिल्लो एक महीनाको अवधिमा सुन र चाँदीको मूल्य निकै आकाशिएको छ । साउन महीनामा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला रु छ हजारसम्मले बढेको थियो । यो वर्ष सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रु ७१ हजार ५०० मा खरीद बिक्री भएको थियो । चीन–अमेरिका व्यापार टवराव, अमेरिका–इरान तनावलगायत कारणबाट विश्व बजारमा सुनको मूल्य उकालो लाग्दै गएको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस एक हजार ५१८ डलर नाघेको छ ।
किन बढ्छ नेपालमा सुनको मूल्य ?
सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विगतभन्दा घटेको छ । भारतमा मोदी सरकारको गठनसँगै डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो भएपछि सुनको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको हो । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारु बलियो हुँदा नेपाली मुद्रा समेत बलियो हुने गरेको छ । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटिरहेको छ । तर नेपालमा भने यसको प्रभाव उल्टो देखिएको छ । नेपाली बजारमा प्रत्येक दिन सुनको औसत मूल्य दुई÷तीन सयको हाराहारीमा बढिरहेको छ । बुधबार प्रतितोला छापावाल सुन ५४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ५३ हजार सात सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला आठ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार पनि झण्डै सोही मूल्यमा सुनको कारोबार भएको छ ।
नेपालमा हाल कारोबार भएको सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार भएको मूल्यभन्दा निकै बढी हो । आखिर किन अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नै तय हुने सुनको बजार मूल्य फरक हुन्छ ? नेपालमा झण्डै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दछन् । वाणिज्य बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र डलरमा आएको उतारचढावकै आधारमा सुन आयात गरेका हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले खरिद गरेको सुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ लगायतका संघहरुमार्फत आम व्यवसायीहरुमा पुग्ने गर्छ । बैंकहरुले भने आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरेको मूल्यमा झण्डै शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत नाफा राखेर व्यवसायीहरुलाई बिक्री गर्छन् । नेपालमा सुनको मूल्य व्यवसायीहरुले नै तय गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुको नियमित बैठकबाट नै प्रतितोला सुनको बजार मूल्य कायम हुने गरेको छ । नेपालमा ठूला सुन व्यवसायीहरुले सुनको प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा बढेको हो । सुनको मूल्य निर्धारणमा पनि ‘कार्टेलिङ’ हुने गरेको र ठूला व्यापारीहरुले आफूसँग बढी मात्रामा सुन छ भने महासंघका प्रतिनिधिलाई मूल्य बढाउन दबाब दिने गरेका छन् । सोही कारण पनि नेपालमा सुनको मूल्य अस्थिर भएको हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य समायोजन गर्न मूल्य निर्धारणमा हुने कार्टेलिङ तथा ठूला व्यापारीहरुको चलखेल बन्द गर्नुपर्छ । आफूसँग अतिरिक्त सुन बढी छ भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई समेत चुनौती दिँदै उच्च रुपमा सुनको मूल्य बढाउनु न्यायोचित हुँदैन
Previous हिरासतबाट रविले भने : आन्दोलनमा एकजना पनि घाइते भएछन भने मलाई हिरासतमा रहेको भन्दा बढी पिडा हुने छ !
Next साउनको महिना भरी सुन छुनै गा*ह्रो